Ipere ekhawulezayo kunye netshizi yebhokhwe quiche | Bezzia
UMaria vazquez | 04/01/2022 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 30/12/2021 19:23 | Iiresiphi ezilula
IiQuiches ngamaqebengwana anencasa kunye nesiseko se-shortcrust pastry kunye nokuzaliswa ngeqanda kunye ne-crème fraîche ephekwe kwi-oven de kusete. I-classic ye-French cuisine evuma iinguqulelo ezininzi kwaye namhlanje senza inguqulelo elula kakhulu: i-quiche ekhawulezayo kunye nepere kunye netshizi yebhokhwe.
Xa umntu engafuni ukuntsonkotha okanye efuna ukukwazi ukuzisa iresiphi etafileni ngexesha elincinci, isibonelelo esilungileyo kukubheja kuluntu lwezorhwebo. Eyona nto ifanelekileyo kukusebenzisa intlama ye-shortcrust yorhwebo, kodwa ungasebenzisa a ipeyistri yokutshaya, ifikeleleka ngakumbi kuyo nayiphi na ivenkile enkulu. Ukuba ixesha alibalulekanga kwaye ufuna ukwenza inhlama yakho, unokufumana indlela yokwenza ngayo kwi-recipe ye i-salmon quiche ukuba silungiselela ukwenza ixesha.
Ngokuphathelele ukuzaliswa, ukuyilungiselela akuyi kukuxelela nantoni na. Imizuzu eyi-10 ukuba i-puff pastry kufuneka iphekwe kwangaphambili kwi-oven yanele ukuyilungiselela. Kwaye kukuba konke okufuneka ukwenze kukupheka iitapile kwi-microwave kwaye udibanise ezinye izithako. Ngaba siya kuqala?
1 ikhefu lepheki
Amapere ama-2 enkomfa avuthiweyo, axotyulwe kwaye anqunyulwa (1,5cmx1,5cm)
Iitapile e-1, ihlutshiwe kwaye yanqunyulwa (1,5cmx1,5cm)
80 g yetshizi yebhokhwe edayiweyo
Iqanda eli-1 elimhlophe lokuxubha
70 g yekhrimu engamanzi
Imbinana yamandongomane ompayini
Ukukhupha i-pastry ye-puff kwaye uyibeke kwi-mold (isuswa ukuba ufuna ukukwazi ukuyikhonza kwisitya okanye ipleyiti). Umgca wesiseko kunye neendonga kakuhle kwaye ususe inhlama engaphezulu. Emva koko, gxobhoza i-bottom ngefoloko, ubeke iphepha lesikhumba phezulu kunye nemifuno eyomileyo phezulu. Yibhake ku-190ºC kwi-oven efudumalayo kangangemizuzu eyi-10. Emva koko susa iphepha kunye nemifuno kwaye ubhake eminye imizuzu emi-4. Nje ukuba yenziwe, yikhuphe kwaye uyiyeke icaphuke ngelixa ulungiselela ukuzaliswa.
Ukulungiselela ukuzaliswa, faka ii-cubes zamazambane kwi-plate, zigubungele ngeplastiki kunye zise kwi microwave. Zipheke ngamandla apheleleyo malunga nemizuzu emi-4 de zibe zithenda.
Ngakolunye uhlangothi, kwisitya, xuba amaqanda ngekhilimu elulwelo kunye nepinki yetyuwa kunye nepepile.
Nje ukuba zonke iindawo zokuzaliswa zilungiswe, brasha isiseko se-puff pastry ngeqanda elimhlophe ukwenzela ukuba ukuzaliswa kungabi manzi.
Emva usasaze idayisi zetapile, ushizi kunye nepere kwi-mold.
Ukugqiba uthele umxube weqanda kunye nekhilimu, emva koko uhambisa isikhunta kancinci ukuze ingene kakuhle phakathi kwedayisi, ngaphambi kokuba ufefe amantongomane epine phezulu.
Thatha eziko kwaye pheka imizuzu engama-35 okanye de ibekwe kwaye ibe mdaka wegolide kwi-190ºC kunye nobushushu obunyukayo nasezantsi.
Thatha kwaye ulinde imizuzu eyi-10 ukucaphuka ukuze utye ipere ekhawulezayo kunye ne-quiche yetshizi yebhokhwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Iiresiphi ezilula » Ipere ekhawulezayo kunye ne-check cheese quiche
Izixhobo zokuphucula ukhuseleko lwe-WiFi ekhaya
Imvakalelo yokucaphuka kwiqabane